Luka Asɛmpa 6:1-49
Yesu yɛ “Homeda Wura” (1-5)
Ɔsaa ɔbarima bi a ne nsa awu yare (6-11)
Asomafo 12 no (12-16)
Yesu kyerɛkyerɛe na ɔsaa yare (17-19)
Nneɛma a ɛde anigye ba ne nea ɛde amanehunu ba (20-26)
Monnɔ mo atamfo (27-36)
Munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn (37-42)
Dua biara aba na wɔde hu dua ko (43-45)
Ɔdan a wosii no yiye; ɔdan a enni fapem pa (46-49)
6 Bere bi, na ɔnam hwiit* afuw mu homeda, na n’asuafo no tetew* hwiit mmɛtem no bi,+ na wɔposae wɔ wɔn nsam+ wee. 2 Ɛnna Farisifo no bi bisae sɛ: “Adɛn nti na moreyɛ nea mmara mma kwan sɛ wɔyɛ no Homeda+ yi?” 3 Na Yesu buaa wɔn sɛ: “Nea Dawid yɛe bere a ɔkɔm dee ɔne mmarima a wɔka ne ho no, monkenkanee da?+ 4 Dawid kɔɔ Onyankopɔn fi, na okogyee paanoo a wɔde ba Onyankopɔn anim* no; odii bi, na ɔde bi maa mmarima a wɔka ne ho no. Ná mmara mma kwan sɛ obiara di bi, gye asɔfo no nko ara.+ Saa asɛm no, monkenkanee da?” 5 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Onipa Ba no ne Homeda Wura.”+ 6 Bere a homeda+ foforo dui no, ɔkɔɔ hyiadan mu, na ofii ase kyerɛkyerɛe. Ná onipa bi wɔ hɔ a ne nsa nifa awu.*+ 7 Na akyerɛwfo ne Farisifo no hwɛɛ Yesu komm sɛ ebia ɔbɛsa yare Homeda no anaa, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛfa kwan bi so abɔ no sobo. 8 Ná Yesu nim wɔn adwene,+ enti ɔka kyerɛɛ onipa a ne nsa awu* no sɛ: “Sɔre gyina mfinimfini hɔ.” Na ɔsɔre gyinaa hɔ. 9 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Merebisa mo, ɛdɛn na mmara ma kwan sɛ wɔyɛ no Homeda, adepa anaa adebɔne? Sɛ́ wobegye obi nkwa* anaa wobekum obi?”+ 10 Na ɔhwɛɛ wɔn nyinaa hyiae. Ɛnna ɔka kyerɛɛ onipa no sɛ: “Teɛ wo nsa.” Ɔyɛɛ saa, na ne nsa no san yɛɛ yiye. 11 Nanso akyerɛwfo ne Farisifo no bo fuwii denneennen, na wɔkɔbɔɔ pɔw hwɛɛ nea wɔde bɛyɛ Yesu. 12 Saa bere no, ɛda bi, opue kɔɔ bepɔw so kɔbɔɔ mpae,+ na ɔbɔɔ Onyankopɔn mpae anadwo no nyinaa.+ 13 Na ade kyee no, ɔfrɛɛ n’asuafo no baa ne nkyɛn, na ɔpaw wɔn mu 12, na ɔsan frɛɛ wɔn asomafo. Wɔn din ni:+ 14 Simon, a ɔsan frɛɛ no Petro, ne ne nua Andrea, ne Yakobo ne Yohane, ne Filipo+ ne Bartolomeo, 15 Mateo ne Toma,+ ne Alfeo ba Yakobo, ne Simon a wɔfrɛ no “nsiyɛfo no,” 16 Yakobo ba Yuda, ne Yuda Iskariot a akyiri yi oyii no mae no.* 17 Na ɔne wɔn sian begyinaa baabi a ɛhɔ da so, na n’asuafo pii, ne nnipadɔm kɛse a wofi Yudea ne Yerusalem, ne Tiro ne Sidon mpoano nyinaa, bae sɛ wɔrebetie no na wasa wɔn yare. 18 Wɔn a ahonhom fĩ haw wɔn mpo, ɔsaa wɔn yare. 19 Ná nnipadɔm no nyinaa pɛ sɛ wɔde wɔn nsa ka no, efisɛ na tumi fi ne mu ba,+ na ɛsaa wɔn nyinaa yare. 20 Na ɔmaa n’ani so hwɛɛ n’asuafo no, na ofii ase kae sɛ: “Anigye ne mo a moyɛ ahiafo, efisɛ mo na Onyankopɔn Ahenni no yɛ mo dea.+ 21 “Anigye ne mo a seesei ɔkɔm de mo, efisɛ mobɛmee.+ “Anigye ne mo a seesei moresu, efisɛ mobɛserew.+ 22 “Anigye ne mo, bere biara a nnipa bɛtan mo,+ na wɔapam mo afi wɔn mu,+ na wɔayeyaw mo, na wɔasɛe mo din* aka sɛ moyɛ nnebɔneyɛfo, onipa Ba no nti. 23 Momma mo ani nnye saa da no na munni ahurusi, na hwɛ! mo akatua so wɔ soro, efisɛ saa nneɛma no ara bi na wɔn agyanom de yɛɛ adiyifo no.+ 24 “Na mo a moyɛ asikafo no, munnue,+ efisɛ moanya mo awerɛkyekye nyinaa dedaw.+ 25 “Mo a seesei moamee no, munnue, efisɛ ɔkɔm bɛde mo. “Mo a seesei moreserew no, munnue, efisɛ mo werɛ bɛhow na moasu.+ 26 “Sɛ nnipa nyinaa ka mo ho asɛmpa a, munnue,+ efisɛ saa ara na wɔn agyanom de yɛɛ atoro adiyifo no. 27 “Nanso mo a moretie yi, mereka akyerɛ mo sɛ: Monkɔ so nnɔ mo atamfo, na monyɛ wɔn a wɔtan mo no papa;+ 28 monkɔ so nhyira wɔn a wɔdome mo, na mommɔ mpae mma wɔn a wɔyeyaw mo.+ 29 Sɛ obi bɔ w’aso baako mu a, dan baako no nso ma no; na sɛ obi fa w’ataade nguguso a, fa ataade a ɛwɔ ase no nso ka ho ma no.+ 30 Obiara a obisa wo biribi no, fa ma no,+ na nea wafa wo nneɛma no, nka nkyerɛ no sɛ ɔnsan mfa mma wo. 31 “Afei nso, sɛnea mopɛ sɛ nnipa yɛ mo no, mo nso monyɛ wɔn saa ara.+ 32 “Na sɛ modɔ wɔn a wɔdɔ mo a, mfaso bɛn na ɛwɔ so ma mo? Abɔnefo mpo dɔ wɔn a wɔdɔ wɔn.+ 33 Na sɛ wɔn a wɔyɛ mo papa no na moyɛ wɔn papa a, mfaso bɛn na ɛwɔ so ma mo? Abɔnefo mpo yɛ saa ara. 34 Afei nso, sɛ mode bosea* rema nkurɔfo, na mode ma wɔn a mohwɛ a wɔbɛsan atua ama mo a, mfaso bɛn na mubenya?+ Abɔnefo mpo ma abɔnefo bosea sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nsa bɛka wɔn sika bio. 35 Mmom no, monkɔ so nnɔ mo atamfo, na monyɛ papa. Na sɛ mode bosea rema nkurɔfo a, mommfa mo ani nnto so sɛ mo nsa bɛsan aka.+ Moyɛ saa a, mo akatua bɛyɛ kɛse, na mobɛyɛ Ɔsorosoroni no mma, efisɛ ɔda ayamye adi kyerɛ bonniayɛfo ne abɔnefo.+ 36 Monkɔ so nhu nnipa mmɔbɔ sɛnea mo Agya hu nnipa mmɔbɔ+ no. 37 “Bio nso, munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn, na wɔremmu mo atɛn da.+ Munnyae sɛ mokasa tia nkurɔfo,* na nkurɔfo renkasa ntia mo* da. Monkɔ so mfa bɔne nkyɛ, na wɔde mo bɔne bɛkyɛ mo.+ 38 Monkɔ so mma, na nkurɔfo bɛma mo.+ Wɔbɛhyɛ susukuruwa ma, amia so, awosow no ama abu so, na wɔde agu mo ntama mu. Efisɛ ade a mode susuw ma nkurɔfo no, ɛno ara na wɔde besusuw ama mo.” 39 Ɔsan maa wɔn mfatoho bi sɛ: “Onifuraefo betumi akyerɛ onifuraefo kwan anaa? Anka wɔn baanu nyinaa bɛtɔ amoa mu, ɛnte saa?+ 40 Osuani nsen ne kyerɛkyerɛfo, na obiara a wɔakyerɛkyerɛ no yiye no bɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfo. 41 Adɛn nti na wohwɛ ntɛtɛwa a ɛda wo nua aniwa so, na wunhu dua* a ɛda w’ankasa aniwa so?+ 42 Wobɛyɛ dɛn atumi aka akyerɛ wo nua sɛ: ‘Me nua, ma minyi ntɛtɛwa a ɛda w’aniwa so yi mma wo,’ bere a wunhu dua* a ɛda w’ankasa aniwa so? Nyaatwomni! Di kan yi dua* no fi w’ankasa aniwa so; ɛno bɛma woahu ade yiye na woayi ntɛtɛwa no afi wo nua aniwa so. 43 “Na dua pa biara nsow aba bɔne, na dua bɔne biara nsow aba pa.+ 44 Dua biara aba na wɔde hu dua ko.+ Nkurɔfo ntetew borɔdɔma mfi nsɔe so, na wontwa bobe mfi nsɔe so, ɛnte saa? 45 Nneɛma pa a onipa pa de asie ne koma mu no, ɛno bi na oyi pue, na onipabɔnefo nso, nneɛma bɔne a ɔde asie no, ɛno bi na oyi ba; efisɛ nea ayɛ onipa koma ma aboro so no, ɛno na n’ano ka.+ 46 “Adɛn nti na mofrɛ me ‘Awurade! Awurade!’ nanso monyɛ nea meka?+ 47 Obiara a ɔba me nkyɛn, na ɔte me nsɛm, na ɔde yɛ adwuma no, mɛkyerɛ mo nea ɔsɛ no:+ 48 Ɔte sɛ ɔbarima bi a ɔresi ɔdan, a otutuu fam kɔɔ akyiri na ɔtoo fapem wɔ ɔbotan so. Enti bere a nsu yirii no, ɛbɛbɔɔ ɔdan no nanso antumi anwosow no, efisɛ wosii no yiye.+ 49 Nanso, nea ɔte me nsɛm na ɔmfa nyɛ adwuma no,+ ɔte sɛ ɔbarima bi a osii ɔdan sii asaase so a wanto fapem. Na nsu yiri bɛbɔɔ ɔdan no, na ebubui ntɛm ara, na ɔdan no sɛee koraa.”
^ Anaa “adwudwo.”
^ Anaa “obi kra nkwa.”
^ Anaa “ɔdan ɔfatwafo no.”
^ Anaa “wɔayi mo din atow akyene.”
^ Anaa “Munnyae sɛ mubu nkurɔfo fɔ.”
^ Anaa “remmu mo fɔ.”